ပရိသတျကွီးကို လှမျးနပေါပွီ ဆိုတဲ့ ဆယျလီ သရုပျဆောငျ နဆေနျး – Maythadin
ပရိသတျကွီးကို လှမျးနပေါပွီ ဆိုတဲ့ ဆယျလီ သရုပျဆောငျ နဆေနျး
May Thadin | August 25, 2021 | Celebrity | No Comments
ဖစျေ့ဘုတျဆယျလီနဆေနျးကတော့ ..သူမြားနဲ့မတူတမူထူးခွားတဲ့ ..ဟာသလေးတှတေငျဆကျရငျးလူသိမြားလာခဲ့တဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။..လှပတဲ့မကျြနှာအမူအရာ အပွောအဆိုတှကွေောငျ့လူအမြားရဲ့အားပေးမှုကို ပိုငျဆိုငျထားသူ တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
ထို့ပွငျ နဆေနျးကပရိသတျတှေ အားပေးမှုကောငြ့ ..ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝငျငှမြေားဖွငျ့ ..သိနျးထောငျခြီ တနျသောအိမျကောငျးကောငျးမှနျမှနျ.. ဆောကျလုပျ နထေိုငျလာနိုငျလာခဲ့ပါတယျနဆေနျးက.. လကျရှိမှာတော့ ..သူဝါသနာပါတဲ့အလုပျတှေ ကိုလုပျကိုငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကိုရရှိကာ.. အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိဆှတျခူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။
နဆေနျးကလညျးသူ့ရဲ့အလုပျကို.. အာဏာသိမျးခံထားရခြိနျတောငျမှ ..မနားပဲ ကွိုးကွိုးစားစားနဲ့ လုပျကိုငျနလေကျြရှိပါတယျ။
နဆေနျးဟာ.. အာဏာသိမျးခံထားရတာတောငျမှ.. ဂရုမစိုကျပဲ အလုပျတှေ ဆကျလကျ လုပျဆောငျနတောကွောငျ့ ပွညျသူမြားရဲ့ အပွဈတငျ ဝဖေနျမှုကိုလဲ.. အပွငျးအထနျ ခံနရေပါတယျ
မကွာသေးမှီကပဲ နဆေနျးနှငျ့ ပတျသတျသညျ့ ကွျောငွာမြားရိုကျကူးထားသညျ့ လုပျငနျးရှငျမြားကပရိတျမြားတောငျးဆိုခကျြအရ နဆေနျးနှငျ့ ရိုကျကူးခဲ့သညျ့ ကွျောငွာမြား ပိုစတာမြားကိုဖကျြခဲ့ပေးပွီးဖွဈကွောငျးတောငျးပနျစာ.မြားရေးသားခဲ့ကွပါသညျ။
အဲနောကျပိုငျးမှာတော့ နဆေနျးက သူ့ဝငျငှကေမြားနတောကွောငျ့ မွနျမာပရိသတျတှအေားမပေးလဲ ရပါတယျဆိုပွီးလဲ ရေးသားထားခဲ့ပါသေးတယျ။
မကွာသေးခငျကလညျး နဆေနျးက ခိုငျနှငျးဝဂေဟောမှာအလှူအတနျးတှလေုပျပွီး ခဏတာပွနျပြောကျသှားပမေဲ့ ဒီနလေ့ေးမှာတော့ နာရေးကူညီမှုအသငျးက လူငယျတှအေတှကျ Spicy ကွကျကွျောနဲ့ အလှူငှလေညျး လှူဒါနျးထားတဲ့အကွောငျးကို
ပရိသတျကွီးကိုလညျး လှမျးနပေါတယျနျော. ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ဖဘေု့တျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရော ကိုထှနျးကွိုငျကို လှမျးနလေားဆိုတာ ပွနျလညျရေးသားပေးခဲ့ပါအုံးနျော..
ပရိသတ်ကြီးကို လွမ်းနေပါပြီ ဆိုတဲ့ ဆယ်လီ သရုပ်ဆောင် နေဆန်း
ဖေ့စ်ဘုတ်ဆယ်လီနေဆန်းကတော့ ..သူများနဲ့မတူတမူထူးခြားတဲ့ ..ဟာသလေးတွေတင်ဆက်ရင်းလူသိများလာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။..လှပတဲ့မျက်နှာအမူအရာ အပြောအဆိုတွေကြောင့်လူအများရဲ့အားပေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ပြင် နေဆန်းကပရိသတ်တွေ အားပေးမွှုကောငျ့ ..ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝင်ငွေများဖြင့် ..သိန်းထောင်ချီ တန်သောအိမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်.. ဆောက်လုပ် နေထိုင်လာနိုင်လာခဲ့ပါတယ်နေဆန်းက.. လက်ရှိမှာတော့ ..သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေ ကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိကာ.. အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဆွတ်ခူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေဆန်းကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကို.. အာဏာသိမ်းခံထားရချိန်တောင်မှ ..မနားပဲ ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။
နေဆန်းဟာ.. အာဏာသိမ်းခံထားရတာတောင်မှ.. ဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ အပြစ်တင် ဝေဖန်မှုကိုလဲ.. အပြင်းအထန် ခံနေရပါတယ်
မကြာသေးမှီကပဲ နေဆန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ကြော်ငြာများရိုက်ကူးထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များကပရိတ်များတောင်းဆိုချက်အရ နေဆန်းနှင့် ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ကြော်ငြာများ ပိုစတာများကိုဖျက်ခဲ့ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းတောင်းပန်စာ.များရေးသားခဲ့ကြပါသည်။
အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ နေဆန်းက သူ့ဝင်ငွေကများနေတာကြောင့် မြန်မာပရိသတ်တွေအားမပေးလဲ ရပါတယ်ဆိုပြီးလဲ ရေးသားထားခဲ့ပါသေးတယ်။
မကြာသေးခင်ကလည်း နေဆန်းက ခိုင်နှင်းဝေဂေဟာမှာအလှူအတန်းတွေလုပ်ပြီး ခဏတာပြန်ပျောက်သွားပေမဲ့ ဒီနေ့လေးမှာတော့ နာရေးကူညီမှုအသင်းက လူငယ်တွေအတွက် Spicy ကြက်ကြော်နဲ့ အလှူငွေလည်း လှူဒါန်းထားတဲ့အကြောင်းကို
ပရိသတ်ကြီးကိုလည်း လွမ်းနေပါတယ်နော်. ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရော ကိုထွန်းကြိုင်ကို လွမ်းနေလားဆိုတာ ပြန်လည်ရေးသားပေးခဲ့ပါအုံးနော်..